U-Edge uxolisa ku-Kurt Angle ngengoma ethi 'Uyaphumelela' - Wwe
U-Edge uxolisa ku-Kurt Angle ngokuqala ngengoma ethi 'Uyaphumelela'
I-Edge kunye ne-Kurt Angle yayiziinkwenkwezi ezimbini ezinkulu ngexesha le-WWE's Attitude Era. Elinye lamaxesha agqamileyo e-Attitude Era yayiyingoma ethi 'Uyaphumelela', uvulindlela ngu-Edge weAngle.
Ingoma yaqala njengesithuko kwi-Olimpiki yeGolide yeOlimpiki, kodwa yaba yinto yomculo kunye nomxholo wakhe womculo njengoko ixesha lihamba.
indlela yokufumana ngaphezulu kweentombi ezidlulileyo
Kutshanje uKurt Angle uthumele ividiyo kwi-Instagram, esabelana ngemvelaphi yengoma ethi 'Uyancwina'. I-Angle ikwabulele ngokuhlekisayo uEdge ngokuqala ingoma.
'Uqale njani ukucula iingoma zakho. Enkosi kakhulu ngeEdge. #yinyani '
Iposti eyabelwe nguKurt Angle (@therealkurtangle)
Iposi lafumana iimpendulo ezininzi, kubandakanya enye evela e-Edge, umyili wengoma ethi 'Uyancwina'. I-Rated-R Superstar yacela uxolo ngengoma kwaye yagqabaza nangokhetho lwefashoni yakhe ngelo xesha, awayenethemba lokuba iya kwenza u-Angle azive engcono.
Uxolo Kurt. Kuthanda. Kukwenza uzive ungcono xa ndinxibe ibhulukhwe ye-pleather kunye neqhosha le-spandex emanzi phezulu. '
U-Edge uxolisa ku-Kurt Angle
Ingoma yaqala ngobusuku obunye obumnandi kwiRAW, apho uKurt Angle wagqiba kwelokuba atyhile isikipa sakhe esitsha. Ngelishwa kulowo wayeyintshatsheli yeWWE, uEdge waphazamisa ukutyhila, etshintsha amagama kwisikipa esithi 'Uyanyoka'.
Uthathe ixesha lakhe, kodwa kuyathandeka ukubona uEdge exolisa mhlawumbi yezona ngoma zibalaseleyo zeXesha lesimo.
iikowuti malunga nokulahleka wafunyanwa
UKurt Angle ukholelwa ukuba inkwenkwezi ye-NCAA nguBrock Lesnar olandelayo
UKurt Angle ungomnye wabadlali abaphambili bexesha lonke, kwaye omnye wabadlali bakhe abakhulu nguBrock Lesnar. Ukusukela kwiintsuku zabo zobungangamsha, bobabini i-Angle kunye ne-Lesnar bahlukane neendlela ezivela kwi-WWE, kodwa i-Olimpiki yeGolide yeMedalist ikholelwa ukuba enye ye-NCAA yenkwenkwezi yokulwa inokuba yi-Lesnar elandelayo.
U-Angle kutshanje uphawule ngelinye lawona mathuba makhulu okulwa - uGable Steveson. U-Angle wamthelekisa noBrock Lesnar, naye owalwa kwiYunivesithi yaseMinnesota.
Ndicinga ukuba uza kuba yinkwenkwezi enkulu. Jonga inkangeleko yakhe. Ukuba uyaziqhelanisa nomzabalazo kwaye ayithathe njengoBrock Lesnar, uya kufana ncam noBrock Lesnar, utshilo u-Angle. Ke, ndicinga ukuba kufuneka athathe ithuba. Nokuba uya kwi-MMA okanye iWWE, enye okanye enye, kodwa kuya kufuneka enze enye yazo. Ndicinga ukuba uyinkwenkwezi yexesha elizayo nokuba wenza ntoni. Ujonge kakhulu kuye. Imbaleki ebalaseleyo. '
USteveson ngokwakhe ukholelwa ukuba yinto enkulu elandelayo eza kwiWWE.
Ndizakuba yeyona nkwenkwezi inkulu @wwe wakha wanayo.
lil lil x ufile
-Gable Steveson (@GSteveson) Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-Matshi 2021
I-Kurt Angle ngokuqinisekileyo ngumgwebi omkhulu wokulwa komntu. Ucinga ntoni malunga namandla kaGable Steveson? Sazise apha ngezantsi.
ungayeka njani ukungenzi nto kubudlelwane
wwe iibhola ezinkulu zomlilo zibonisa ngokupheleleyo
ingaba ufuna ukulala nam nje
ukwazi njani mfo akanamdla kuwe
ndifunxa yonke into endiyenzayo